Obodo kacha ibu na Spain | Akụkọ Njem
Obodo kacha ibu na Spain
Maria | | Spain obodo, Getaways
Foto | Telemadrid
Madrid na Barcelona bụ ndị isi obodo na Spain na ndị kasị ibu ma ọ bụghị naanị ha. Ọganihu nke nnukwu obodo ndị Spain bụ n'ihi nnyefe nke ime obodo bi n'obodo ukwu, mgbe mgbanwe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọtụtụ na-eto ngwa ngwa. Ugbu a, olee obodo kachasị na Spain?
Isi obodo Spain bụ obodo kachasị ukwuu na ọtụtụ mmadụ na Spain nke nwere nde mmadụ 3, bụrụ mpaghara nke atọ kachasị ukwuu na Europe na nde 6, ma London na Paris. Madrid bụ otu n'ime obodo ndị na-adọrọ mmasị na Spanish ị ga-eleta ebe ọ nwere ọtụtụ ebe ndị njem nlegharị anya site na akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị na gastronomic.
Site na echiche ọdịbendị, Madrid bụ onye ama ama maka triangle nka nke El Prado, Reina Sofía na Thyssen-Bornemisza gosipụtara, 3 nke ihe ngosi nka kachasị mkpa na Europe. Agbanyeghị, ọ nwekwara ebe ngosi ihe mgbe ochie ndị ọzọ dịka MAN (National Archaeological Museum), Museum of Romanticism ma ọ bụ Sorolla Museum.
N'ime etiti akụkọ ihe mere eme bụ ebe ndị njem nleta kachasị dị ka Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza na Palacio de Oriente, Gran Vía, Katidral Almudena ma ọ bụ Templelọ Nsọ nke Debod, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ciudad Condal bụ nke abụọ kachasị ukwuu na mba na nke isii na ọnụ ọgụgụ na European Union. Barcelona bụ obodo Spanish kachasị ewu ewu na mba ọzọ, otu n'ime obodo ndị ahụ ị na-agaghị echefu ma ọ bụ njem gị na Mediterenian, na njem azụmahịa ma ọ bụ n'oge ị na-aga Spain.
O nwere ezigbo onyinye ọdịbendị, gastronomy na-atụ aro na ụsọ mmiri dị egwu iji luso oke okpomọkụ n'oge okpomọkụ. Plaza de Catalunya bụ etiti etiti Barcelona na nkwụsị n'etiti akụkụ ochie nke obodo ahụ na Ensanche, mana okporo ámá kachasị ama bụ Las Ramblas. Ha na-adi ndu mgbe nile, juputa na ndi njem nleta, ulo ahia ifuru, na ndi na eme ihe n’okporo.
Mana ọ bụrụ na amaara ya na ụwa maka ihe ọ bụla, ọ bụ maka ọrụ nke ọkaibe na-ese ụkpụrụ ụlọ Antonio Gaudí. Onye na-ese ihe na-ama ụlọ ọrụ nke oge ya aka ma degharịa isi obodo ahụ na ụdị nke ya: Casa Batlló na La Pedrera, Park Güell ma ọ bụ Sagrada Familia, akara ngosi mara mma nke Barcelona.
Ebe ọzọ nke ị nwere echiche dị mma banyere Barcelona bụ Montjüic Mountain, echiche nke jupụtara na ebe ndị njem nlegharị anya dịka National Art Museum of Catalonia, Montjüic Fountain na Castle, Joan Miró Foundation ma ọ bụ Ogige Botanical.
Valencia bụ obodo nke atọ kasị ukwuu na Spain na otu n'ime isi njem nleta na mba ahụ, ọ bụghị naanị site n'echiche ọdịbendị na nke gastronomic kamakwa ecotourism. A na-enwe ekele dị ukwuu n'ụsọ osimiri ya site na ndị hụrụ oké osimiri n'anya ma n'ihi ihu igwe ya dị nro, Valencia bụ ebe dị mma ịga leta oge ọ bụla n'afọ.
Offọdụ n'ime ebe nnọchi anya ya kachasị nleta n'oge njem na obodo Turia bụ Lonja de Valencia, Torres de Serrano na Quart, Katidral ebe edobere nsọ nsọ, Oceanogràfic ma ọ bụ Barrio del Carmen, ebe ezumike na ọdịbendị na Valencia jupụtara na ọnọdụ nwere ọnọdụ ntorobịa zuru oke iji detụ nri kachasị mma na mpaghara na nke ụwa yana ị ga-aga oriri na ọyingụ .ụ.
The ọzọ kasị ukwuu Spanish obodo bụ Seville, nke a maara nke nwere kasị ibu obodo ochie na Spain na-otu nke kasị ibu na Europe. Ọ bụ ebe ndị ama ama na-eme njem nlegharị anya na Spain ka ọ na-egosipụta ọmarịcha ọdịbendị na nka nke ndịda Spain.
Lonely Planet, onye nkwusa a ma ama nke ndị nduzi njem nleta họọrọ Seville dị ka obodo kachasị mma n'ụwa iji gaa na 2018. Toche echiche banyere Seville bụ ime ya na Giralda, Torre del Oro, Real Alcázar, Museum of Fine Arts or Ogige Spain.
Obodo maña nke di na ndagwurugwu Ebro bu ebe nke ise ndi mmadu kacha biri na Spain na 664.953. 50% nke Aragonese bi na Zaragoza. N'ebe dịdebere isi obodo ahụ enwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị mkpa na nnukwu ụlọ ọrụ na mpaghara ụgbọala nke na-akwado akụ na ụba nke Aragonese.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Obodo kacha ibu na Spain
Utilọ nkwari akụ dị na Toledo
Ihe ị ga-eme na Seville